Caro ka dhalatay dad rayid ah oo lagu laayay Koonfurta Gaalkacyo | Saxil News Network
Image captionMagaalada Gaalkacyo
Dad badan oo kamid ah waxgaradka Soomaalida ayaa si weyn u dhaliilay dil sagaal qof oo rayid ah loogu geystay Koonfurta Gaalkacyo, kuwaasoo sida muuqata loogu aarayay sarkaal ka tirsan nabad sugidda Galmudug oo xalay lagu dilay magaaladaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inuu dilay sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Cali Dhiif.
Sababta ay u dileen ayay ku sheegeen inuu hogaaminayay ciidamo Galmudug ka tirsan oo Al-Shabaab dagaalyahanno uga laayay qaarna kaga qabtay xilligii uu socday duulaankii uu ururkaasi ku qaaday Puntland horraatii 2016.
Dilka sarkaalkaasi ayaa sababay in sagaal qof oo rayid ah ay rag hubaysan xalay ku dilaan Koonfurta Gaalkacyo, sida ay BBC-da u xaqiijiyeen dadka deegaanka. Dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay qaarkood kasoo jeedaan deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa BBC-da u sheegay inuu aad uga xun yahay waxa dhacay, ayna gacanta ku dhigeen dad lagu tuhunsan yahay falkaasi.
Dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan, ayaa BBC-da u xaqiijiyay in dadkaasi la laayay ay kasoo jeedaan deegaannada maamulkiisa, waxaana uu sheegay inay baaritaanno wadaan.
Ugaas Xasan ayaa intaa ku daray inay jiraan dad badan oo Koonfur Galbeed u dhashay kuwaasoo cabsi awgeed xalay ku hoyan waayay guryahooda ku yaal Gaalkacyo.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa cambaareeyay arinta ka dhacday Koonfurta Gaalkacyo, waxaana uu sheegay in iyaga oo kaashanaysa hay’adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed, odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradka ay baaritaan ku samayn doonaan falkaasi, tallaabo sharci ahna laga qaadi doono cidda ka dambeysay.
Dhawaan ayay ahayd markii uu maamulka Galmudug beeniyay inuu soo saaray amar la sheegay in deegaannadiisa uu uga mamnuucayo dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed.
Arintaasi ayaa daba socotay kadib markii la sheegay in nin doonayay inuu isku qarxiyo xaflad ay joogeen mas’uuliyiin ka tirsan Ahlu Sunna Waljaamaca oo ka socotay magaalada Guriceel, uu heyb ahaan noqday qof kasoo jeeda Koonfur Galbeed.